Amathiphu Quick Ukuhlala Overnight at Tianzi Hotel (Langfang)
Mashi 7, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	ukuphathwa Hotel isebenzisa izindlela eziningi ukuze ahehe izivakashi siqhubeke ehhotela yabo. Omunye wemiqondo ethandwa kakhulu ukuklama sakhiwo yehhotela isakhiwo esiyingqayizivele. Emzini Langfang, Heibei, China, uyokwazi ukuthola ehhotela nge design esiyingqayizivele. Ihhotela futhi waziwa kaKesari Hotel, iNdodana Heaven Hotel, futhi
Mashi 1, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	I Aldar sakhiwo indlunkulu, esemgwaqweni ku Al Raha Beach, Abu Dhabi, Uni Arab Emirates, laziwa kahle njengoba sezakhiwo yisakhiwo sodumo kunazo zonke emhlabeni manje kusukela 2010. Lesi sakhiwo ethile bazokwazi ukunikela abanye amalungelo Okwaphawuleka njengoba izungezwe umsele, ulwandle, futhi nomuzi. Enye yezinto
February 28, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	Izikhulu Street Gardens indawo esigodini yomphakathi ukuthi uzungezwe Edinburgh Castle enyakatho Nezikhulu Street Edinburgh eningizimu. Lokhu Garden unezitho ezintathu. Lokhu ingadi emgwaqweni liyindawo ohlukanisa Edinburgh sika Old and New Town kanti futhi kuba endaweni enjalo umphelelisi labo izakhiwo eziyinhloko kulo muzi. Lokhu
February 27, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	Holyrood Palace noma waziwa kakhulu ngokuthi uMariya Queen of Scots, yiyona State Indawo ezisetshenziswa njalo Indlovukazi yemikhosi State kanye bezijabulisa esemthethweni. Kulesi palace, lezi zivakashi futhi izivakashi ungakwazi ukuhlola for more than 10 omangalisayo izindawo zomlando kanye Apartments State; ubuhle romantic ikuyise kuwo ama-Holeyrood
February 25, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	Millau Viaduct Bridge yasungulwa ukuphungula amakhilomitha amahlanu ubude traffic congestionin minyaka yonke elenza isiminyaminya okwenzeka lapho izivakashi enze indlela yabo eningizimu ngesikhathi sasehlobo, uya esigodini ibe Millautown ukuthi waba Jamming othandwayo kuleli A75 auto umzila. Ukwakhiwa kule ndawo kwakunzima akamuhle kuleyo ndawo okungukuthi
February 24, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	The Royal Gorge Bridge futhi Park kungenye yezindlela ezingcono kakhulu kwezokuvakasha lezinto ukuthi kufanele uvakashele sonke isikhathi uya Colorado, i-United States of America. Lokhu park ikakhulukazi liyindawo kangaka ukuthi kulula kangaka ukufika, okuyinto imizuzu kuphela kusuka Canon City and amahora ambalwa ukusuka Colorado Springs and Denver. Ikona